Kabtanka Man City Vincent Kompany oo dhaawac cusub uu soo gaaray kulankii ay xalay ka adkaadeen Swansea City – Gool FM
(Swansea) 22 Sebt 2016 – Daafaca kooxda kubadda cagta Manchester City ee Vincent Kompany ayaa ku guuldarreystay inuu dhammaysto kulankii League Cup oo ay xalay kooxdiisu guusha ka gaartay Swansea City sababto la xiriir dhaawac cusub ka gaaray bowadada kulankan oo uu dib ugu soo laabtay kooxdiisa.
Xiddiga xulka qaranka Belgium, kaasoo seegay wareegga xiriirtaanka xilli ciyaareedkii hore ayaa markiisii ugu horreysay xalay garoonka ku soo bilowday tan iyo markii Pep Guardiola uu kooxdan Man City tababare u noqday.
Kompany ayaa dhaawacaas dartii dhammaysan waayey 90-ka daqiiqo ee ciyaarta, waxaana la arkayey isagoo dhaafay kursiga keydka kooxdiisa City oo sii lugeynaya dusmada garoonka intii lagu guda jiray kulankii kooxdiisa Man City ay 2-1 uga adkaatay Swansea ciyaartii ka dhacday Liberty Stadium.
Kaddib kulankaas oo ka tirsanaa wareegga saddexaad ee league Cup, macallin Pep Guardiola ayaa suxufiyiinta u sheegay in Kompany dhaawaciisa aysan u badnayn inuu yahay mid halis ah, laakiin uusan ka hadli Karin ilaa laacibka uu la kulmo dhaqtarka kooxda.
Dhinaca kale isku aadka wareegga afaraad ee League Cup ayaa xalay la sameeyey waxaana madaxa isla gali doona oo isku beegmay kooxaha daris wadaagga ah ee ka wada dhisan magaalada Manchester ee Man United iyo Man City.
Iniesta oo rikoor cusub u dhigay La Liga